Homeसमाचारमन थामेर भिडियो हे’र्नुहोस्, चपटप बेच्ने आमाको रुवाउने कथा
April 18, 2021 admin समाचार 1648
कालिका खरेलले पछि’ल्लो एक महिनादेखि ठेलामा चटपट, पानी र घरमै फ’लेका तरकारी बेच्दै आएकी छन् । काठमाण्डौको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मुलपानी पिप’लबोटमा उहाँको घर छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा घर भएपनि गु’जारा चलाउने कालिकालाई ठेलाको व्यापार गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।
ठेलाको व्या’पार गर्र्न भन्दा पहिला उनले ज्यामी मजदुरको काम गर्ने गरेकी थिइन् । कोरोना भाइरसको कार’ण उनले गर्दै आएको काम पनि बन्द भयो । ‘काम गर्न गाह्रो भएपनि राम्रै आम्दानी भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘कोरोना’का कारण काम रोकियो अनि ठेला’मा चटपटे बेच्न थालेकी छु ।’
अर्काको का’ममा भन्दा आफ्नो काममा रमाउने थालेको उनी बताउछिन् । अहिले उनले दैनिक १ हजारसम्मको व्या’पार गर्ने गरेकी छन् । एक हजारको व्या’पार गर्दा उनलाई ४÷५ सय जति फाइदा हुने गरेको छ । जुन रकम घरखर्चमा सकिने गरेको उनले बताए’की छन् ।
‘पैसा नभए सबैले हेप्छन्’ उनले दुख’का आँसु खसाल्दै भनिन्,‘पैसै सबैथोक रहेछ, त्यही भएर दुख गरीरहेकी छु ।’ उनका श्रीमान पनि जागि’रे हुन् । दुइ छोरा हुर्किस’केका छन् । तर पनि आफ्नो सँगै भान्छा हुने खर्च भने कालिका आँफैले जोहो गर्दै आए’की छन् । ओएस नेपालबाट
June 20, 2021 admin समाचार 540
March 22, 2021 admin समाचार 1639
November 30, 2020 admin समाचार 4572
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (194059)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186660)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (186183)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (186123)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (184281)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (184065)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182625)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181720)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (175315)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151915)